Nhau - Hanukeii
Mufashoni uye Hupenyu Style Blog
Mhando Dzese Nhau Entretenimiento Vanhu Lifestyle Recipes Kuziva uye Kuziva Trends Kufamba uye Nzvimbo
10 vakakurumbira vasina vasina magirazi avo ezuva
Chii chiri kuseri kweava vatambi vanobva munyika ye cinema, mimhanzi uye varaidzo, vanowana shamwari yavo yepamusoro mumagirazi. Ndezvipi zvinangwa chaizvo zvavanoshandisa gafas de sol kunyange husiku kana mumba? Chakavanzika chakazara chatagadzirisa. Kana iwe uchida kuiwana, ramba uchiverenga!
Chii chatingaite pasina mukana wekuti isu tigovane nguva dzese dzekufamba kwedu? Hatigoni kumirira kukuudza ZVESE! Pane ino nguva, takuunzira runyorwa rweinonyanya 'kutorwa mifananidzo', 'instagrammable' nzvimbo, muchidimbu, yeimwe remaguta edu aunofarira: Los Angeles, California. Isu tinokuudza zvese nezve izvi zvinoshamisa mavara uye tinokupa imwe kana imwe muromo, kana uri kuronga kumushanyira.
Alexandra Pereira: Simba, fashoni uye kurudziro.
En Hanukeii isu tinoda kugovana mareferenzi kubva kunyika yemafashoni, network uye mararamiro. Ndokusaka pachiitiko ichi, isu tisingadi kukuudza iwe kwete zvese, asi zvimwe zvinoda kuziva nezve Hispaniola Alexandra Pereira. Mufambisi wemabloggi muEurope, nhoroondo yayo uye kusvika kwayo kubvira payakapinda mudhijitari. Zvakare ungade here kuziva kuti his style of gafas de sol kufarira? Chokwadi iwe uri kutofungidzira izvo.
Kana iwe uri mudikani wemhuka uye zvakare kuti iwe unozvizivisa navo mune akawanda mativi, rega tikutaurire iwe kuti mumwe nemumwe wedu ane mweya wemhuka. Kana iwe usingazive zvatiri kutaura nezvazvo uye iwe ungade kuziva kuti ndeipi mhuka ine hunhu hwako inonyanya kuratidza, takuunzira iyi quiz uko nekuwedzera kune mhuka, iwe uchanyatso kuziva neyedu hats!
Iwe unodzika nemugwagwa uye iwe unoona vakomana vachitamba pamberi pe mobile, kana urikuita mupumburu pa Instagram uye kunze kwekunze a dambudziko, izvo zviuru zvevanhu zviri kuita. Unoziva here zvatiri kutaura nezvazvo? Chokwadi zvese zvirimo zvinobva TikTok uye kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi App uye uve kutapukirwa, tinokuunzira hunyengeri hunogona kukubatsira iwe kurwisa algorithm. Wagadzirira Here?
Kune nzvimbo, nguva, vanhu uyezve ... Caps! Izvo zvinoramba zvakamira mundangariro medu. Ehe! Ino nguva takuunzira gwara rine zvinhu zvishanu zvaunofanira kuona kana iwe uchishanyira gungwa zvakanyanya hipster, ine mamwe maitiro uye mamiriro epacific: Venice Beach. Tsvaga kuti chii chinoita kuti chive chakakosha uye nei tichichifarira Hanukeii.
Maonde ice cream: Muedzo chaiwo
Zhizha, kupisa uye ... Ice cream! Paunofunga kudya ice cream zvichibva pane zvakasikwa zvigadzirwa, tinogona kukuudza kuti iko kunzwa kwekutadza kunonyangarika! Ino nguva isu takuunzira inonaka recipe ine michero yakachena: Maonde echando mafuta. Kutonhorera pazhizha rino uye unakirwe ne #barefootlife takabatana nemaresipi edu. Chii chavakanakira?
Zuva reMambokadzi Rakachinja Nhoroondo: Rarama Rubatsiro 1985
"Mwari ponesai Mambokadzi"... Kunzwa kwekurarama mimhanzi kwakachinja mushure mekunge Mambokadzi atora matomu echiitiko chaizoshandura iyo anorarama kuita izvo zvaizouya mushure mechiitiko ichi. Gore rega rega zvinorangarirwa kuti hakuna kumbove nemharidzo yakadaro inopfuura sei Mercury yakamutsa, muzhizha iroro ra 1985, mwoyo yavatariri vane mamirioni 1.500 XNUMX. Ungada here kuzvinunura?
Lombard Street nedzimwe nzvimbo gumi dzausingafanire kupotsa kana ukashanyira San Francisco, CA.
Chii chaunoda kuve pamberi peSan Francisco Bay uchidya a Dungenes crab uye kugadzirira kuenda kuChina Town kunoshanyira kona yega yega yenzvimbo yekushanya. Kana pamwe tinofanira kuenda ku Lombard Mugwagwa? Tinoda kukuratidza runyorwa rwepamutemo rwegumi nzvimbo dzinofanirwa kuziva kana iwe uchienda kuzororo kuSan Francisco, isu zvakare tinokuudza iwe chimwe chezvakanakisa zvakachengetedzwa zvakavanzika zve Hanukeii. Unoda kuziva?
Kusarudza magirazi ezuva harisi basa riri nyore
Muchinyorwa chedu nhasi takuunzira gwara rakazara kuitira kuti uve naro parinotevera nguva yaunoenda kunosarudza magirazi ezuva anotevera. Hanukeii. Tinokuratidza iwo ese matipi ayo asina mumwe munhu akakuudza. Iwe unoda kuziva zvakawanda? Verenga isu!
4 magirazi emagetsi emumafashoni
Kuseri kwechimiro chikuru chemagirazi, pane yakakura nhau. Muchokwadi, mamwe emamodeli ayo achiri kushanda nhasi akwanisa kutsungirira nekufamba kwenguva uye anoenderana nemaitiro nekuti akaratidzira nguva yechiratidzo munyika yevaraidzo. Tinokuratidza kuti ndeapi masitaera gafas de sol izvo zvakamisa pamberi nepashure, uye chakanakisa chinhu ndechekuti iwe unokwanisa kuvawana mairi Hanukeii.
Lagoons, Misika uye Vavakidzani; Nzvimbo dzinotikurudzira kugadzira
Kuseri kwemazano makuru kunogara kune chinokonzeresa, chikonzero chakati. Kwatiri, kune nzvimbo nemashiripiti isu inspire, izvo zvinotifambisa kuti tigadzire edu mamodheru e gafas. Muchinyorwa chanhasi isu tichataura newe kubva kuRed Lagoons muChile, kumakona emisika inonakidza kwazvo muCalifornia. Uri kuzoipotsa here?
"Qi" ndiyo yoga nyowani
Qi, mhando yeyoga iyo tsika dzese dzakabudirira uye iri kuwana imwe mukurumbira mumasaiti. Nekuti takaona kuti zvakakosha sei kuziva maitirwo edu simba, kunzwisisa uye kugamuchira izvo zvakatikomberedza. Kunze kwekuwana hunyanzvi hwehunyanzvi, tinokukoka iwe kuti uverenge chinyorwa chedu nhasi, patinokudzidzisa zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyi modality zororo.
Cuba, rwendo kuenda kune yakapfuura: Nzvimbo dzino tenderera kushanyira chitsuwa
Gungwa, mhepo uye gungwa! Tiri kunakidzwa nezhizha muCaribbean, uko iyo nguva zvinoita kunge chando. Ehe! Tiri kutaura nezvazvo Kiyuba, ino nzvimbo yemashiripiti, izere nenhoroondo netsika. Muchirongwa ichi tinodonongodza nzvimbo dzakanakisa dzaunofanira kushanyira nekuchengetedza mumaGIs ako nyaya kana iwe uripo. Nenzira, usakanganwa magirazi ako Hanukeii, Uchavada !.
Yedu yezhizha muunganidzwa yakazvarwa muCalifornia
Mune yedu posvo nhasi tinoda kukuudza zvese izvo zvatinonzwa kuzivikanwa uye nekufemerwa patinogadzira edu akaunganidzwa e Hanukeii. Ino nguva isu tichataura nezve idzo nzvimbo, mavara, ndangariro dzakaumba magadzirirwo egirazi redu Pacific, Hyde y rweLaguna. Ungada here kuziva zvavari? Ramba uchiverenga!
4 Kudya kwemangwanani kwakanaka kunobva pakudya kweKeto.
Zhizha rasvika uye kana iwe uchinzwa kuti zvakanyanyisa kunonoka kutanga iko kuita bhikini, dzikama! Takuunzira chinhu chine hutano uye chinonaka panguva imwe chete. Nemarepeti mana aya kuti uperekedze mabhureki ako zvichienderana neketeni yeKeto, unenge wakagadzirira kumahombekombe mumavhiki mashoma. Sevha iyi posvo, nekuti chinyorwa ichi chinonakidza kwazvo.
Asia, Caribbean, Oceania, uye Europe: Imba kune Kuchengetedzwa kweZvitatu Zvipenyu.
Sezvo yega yega mhuka yakasarudzika, ndizvo zvakaitawo nharaunda yakavakomberedza. Iyo inovabvumidza kuti vape mamiriro akakodzera ekuchengetedza kwavo. Bheya Panda, the ma dolphin and the nondo ndivo vatambi vedu nhasi. Isu tinokuudza zvese nezve kwavo pekugara, nezvavo uye ah! hongu, kuti mhuka idzi dzakatikurudzira sei kuti tigadzire kuunganidzwa kwedu kwe hats.
Tinoda San Francisco. & saka cal
Zvinowanzo taurwa kuti zviri nani kutora zviitiko pane zvinhu, uye chokwadi ndechekuti kwatiri, nzendo dzakatizadza Kufuridzirwa. Uye ndezvekuti isu tiri izvo mukati Hanukeii, isu tinorarama munguva uye tinoisa kugona kwedu kubhururuka. Ndiri kudaro pachiitiko ichi, California uye makona ayo ese anoona magirazi edu. Lombard, Soma uye Southcal. Uri kuzoipotsa here?
Kuita zvisingaonekwe kuoneka: Koalas neZebra
En Hanukeii tinozvizivisa nezvakasikwa, zvese zvinotisanganisa nehunhu hwedu: #barefootlife Kwete?. Ndokusaka isu tichidada kwazvo kupa kwedu kuunganidzwa kwemakepesi. Hanukeii: rakafemerwa na hupenyu hwemhuka. Pane ino chiitiko protagonists ndeiyi: Zebra neKoala Caps. Makapu akagadzirwa kuti asingaonekwe aoneke. Uye iwe, unotova neyako here?
Rarama musimboti wezhizha nemagirazi e Hanukeii
Kana zvasvika zhizha Hanukeii iri mumutsara wepamberi. Muchinyorwa chedu nhasi tinokuratidza ichangoburwa mu pfungwa zhizha rino uye kunyange zvirinani, kubva paruoko rweedu matatu mamodheru egirazi ezuva pamusoro penguva: Hyde nhema, Kamba Lagoon y Pacific Nhema. Tsvaga kuti ungasanganisa sei uye chii chiri chinoita kuti chishamise.
Iri sei nzira yekugadzira magirazi ezuva Hanukeii
Unoziva here kuti maitiro ekugadzira magirazi ako ari sei Hanukeii? Muchinyorwa chedu nhasi, tinokuudza zvese zvakadzama nezvese basa riri kumashure kwemagirazi ezuva e Hanukeii.
Magirazi ezuva aunozoona muzhizha rino kwese kwese
Uri kufunga kuvandudza magirazi ako muzhizha rino here? Kana mhinduro iri hongu, tinokukorokotedza iwe, nekuti inguvai irinani kupfuura ikozvino, kupfuura zuva, kumahombekombe, dziva uye zvirongwa zvakangotanga. Iwe unoda kuziva here yazvino mune magirazi ezuva maitiro ezhizha? Tinokuudza zvese!
Iwo akanakisa emahara mabhawa ekunakirwa muzhizha!
Kugamuchirwa kuzhizha! Iwe uchitova nezvose zvakagadzirira yako yegungwa zororo, ko kana? Iwe haugone kupotsa chinyorwa chedu nhasi. Tinokudzidzisa iwe iwo mashanu akanakisa mabhawa emahombekombe iyo iwe yaunogona kuwana muSpain, uko masitayiti uye nyaradzo inotonga, uye nezvimwe nemagirazi ako ezuva Hanukeii.
Spaghetti Carbonara: Iyo yekubheka ine yakawanda nhoroondo
Iyo yekusingaperi città ... Tinosuwa sei kufamba uye kufadzwa nenzvimbo nyowani netsika nemagariro. Uye, kana isu tichifunga nezveItari, iyo inoshamisa gastronomy inouya mupfungwa, Mamma mia! . Pane ino nguva isu tasarudza kukuunzira bhurogu yakatsaurirwa kunyanya kune imwe yezviuru nzira dzekudya pasta, kabhoniara, Isu tichakuudza zvese nezvenhoroondo yayo uye nenzira kwayo yekuigadzirira!
Iyo yeGerman doro tsika yeiyo Oktoberfest Iyo yatipa imwe yeiyo yakapusa uye inokurumidza ndiro yekugadzirira. Uye ndiyo iyo iyo doro Inoshanda se marinade yemarudzi ese enyama, asi ne kanaa, Zvinongoyevedza! Ndokusaka isu tichida kukuratidza iyi ino yakanaka nzira, iyo yekutanga ine nhanho dzese dzaunoda kutevedzera kupenya vashanyi vako.
Tsvaga akanakisa epamhepo kunyorera kurodha ako aunofarira Instagram mavhidhiyo
Zvakaitika kwauri here kuti iwe uri pane yako Instagram, iwe ukaona zvemukati zvakanakisa uye iwe unoda kuti vako vokukurukura kuti vazvione kuitira kuti vafemedzwe senge iwe? Muchinyorwa chedu nhasi, tinokuunzira zvishanu zvinoshandiswa zvekutora zvinyorwa zvepa Instagram zvakaita semifananidzo nemavhidhiyo, uye hei, kunyangwe iyo nyaya yeavo vaunofarira kukurudzira.
Maitiro ekubatanidza ako ePacific magirazi Hanukeii Hailey Baldwin
ari gafas de sol mutsa Cat Eye s Pacific by Hanukeii Izvo hazvife zvakabuda kunze kwechitaera, zvinogara zvichipa yakadzikama uye yakashongedzeka dhizaini kune avo vanoapfeka. Ndicho chikonzero, muchinyorwa chedu nhasi tinokuratidza nzira nhatu dzeku sanganisa muunganidzwa wedu Pacific kutevera chimiro chemuAmerican modhi uye muparidzi pamusoro kubva ...
Zvakadaro hauzive iyo nhoroondo yeiyo yakasarudzika migomo ngowani? Isu tichakuudza!
Ngowani yakazvarwa kuitira kuchengetedza varedzi uye varimi kubva kune yakashata mamiriro ekunze uye iyo yaitove chikamu chekupfeka kwemauto emauto, nhasi ndeimwe yezvishongedzo. nyeredzi Streettyle uye kurudziro yevagadziri pane avo catwalks. Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve imwe yekucheka-kumucheto maitiro ezhizha rino, usarasikirwa neichi posvo!
SOMA Unganidzo: Magirazi ezuva akafuridzirwa nemaguta dhizaini yeounyanzvi nzvimbo yeSan Francisco
Paunonzwa izwi SOMA Iwe urikufungei nezvazvo? Kana chinhu chekutanga chakauya mupfungwa chaive muunganidzwa wedu unoshamisa we gafas de sol rakafuridzirwa nenharaunda yeSan Francisco "Maodzanyemba eMusika" Zvakanaka, iwe wakazviwana! Mune yedu posvo nhasi tinokuudza ZVESE zvaunoda uye zvaunoda kuziva nezve vedu SOMA muunganidzwa newe, unotova neako here?
Dzivirira yako Hanukeii ino zhizha: Mamwe matipi!
Lifestyle Kuziva uye Kuziva
Iyo Zuva uye nayo, mhirizhonga yezviuru zvezvirongwa zvakamirira! Ndokusaka takagadzirira runyorwa nemamwe matipi ekuti uchengetedze magirazi ako Hanukeii zvekunze zvinhu zvinogona kukuvadza kana kuisa zvisizvo. Hausati waona posvo ine hanya neyako Magirazi ezuva, zvakadii nezvezvirongwa zvako!
Kupera kwevhiki?: Aya mahotera mashanu epakutanga kuSpain
Lifestyle Kufamba uye Nzvimbo
NdiChishanu munguva pfupi iri kutevera uye isu takugadzirira rondedzero yako ine mashanu epamoyo mahotera kuSpain. Uye patinoti 'zvepakutanga' tinoreva kune iwo mahotera ayo anopa pekugara neimwe nzira. Kubva pakurara tichiona nyeredzi, kusvika pakumuka pakati pesango. Inoridza bhero here? Tsvaga zvimwe mune yedu chinyorwa nhasi!
5 maresitorendi ane fashoni muMadrid kwaunogona kushandisa hunyanzvi hwako.
Ungada kofi here? Muchinyorwa chedu nhasi tinokuitira chikumbiro chausingakwanise kuramba. Chinyorwa chemashopu mashanu ekhofi anokurudzira dhizaini uye kugona. Zvibvumire iwe kutapukirwa nharaunda yayo uye unakirwe nenzvimbo dzakasarudzika dzeMadrid. Ungatsunga?
Iwo mashanu akanyanya mimhanzi mitambo munyika! Wana kurudziro uye gadzirira chiitiko chako chinotevera
Zvinogoneka kuti iyo 2020 yakatisiyira kuora moyo apo mimhanzi yemitambo yaifanira kumiswa nekuda kwedenda. Nhasi gore rakatevera, tinotarisira kudzoka kwevakawanda vavo. Muchinyorwa chedu nhasi, tinokuunzira iwo mashanu akanakisa mimhanzi mimhanzi zvepasi, avo vachadzoka uye avo Anotarisa kutyisa kupfuura izvo zviitiko izvi zvakatiunzira.
Hausati wasangana naHalston here? Kana iwe uri mufashoni anonyanyisa, iwe uchada iyi Netflix miniseries
Kana iwe uine shungu nezve nyika ye Moda uye unonakidzwa nekuona akateedzana kana mabhaisikopo kwaunogona kuwana zvese zvakadzama nezveiyi hombe yekugadzira indasitiri. Muchinyorwa chedu nhasi tinokudzidzisa iwe zvese zvaunoda kuti uzive pamusoro pezvitsva zvitsva Halston uye hupenyu hwake husina kutya.
Wanga uchiziva here kuti magirazi ezuva ane zvikamu zvakasiyana?
Ndizvozvo, magirazi ezuva ane zvikamu! Chishongedzo ichi chinotora chinonyanya kukosha kuchengetedza maziso ako. Ndokusaka takagadzira chinyorwa ichi kuti iwe uzive zvikamu zvaunofanira kufunga nezvazvo paunenge uchitenga magirazi ako ezuva, kuitira kuti aenderane nenguva yega yega yezuva rako zuva nezuva.
Ma90 adzoka! 5 zvipfeko zviri kutenderera zvekare iyi 2021
Fashoni irwo rwendo rwekufamba kuburikidza nenguva. Hazvina kuitika kwauri kuti iwe uburuke pasi Gran Vía muMadrid uye uone musikana ane bhachi zvakawedzera yeganda uye iwe unonzwa uchiona hunhu hweimwe terevhizheni akateedzana ema90s? Unogona kufunga kuti zvese zvinodzoka. Asi chokwadi ndechekuti fashoni inoshandurwa zvinoenderana netsika nemagariro. Tsvaga kuti ndeapi ma2021s maitiro ari kutsanangurwa patsva muna XNUMX!
Unoziva Alexa Chung here? Uyu mugadziri uye munyori anotikurudzira!
Chiso chemusikana uyu ndechekuziva iwe. Tarenda rake harina kufananidzwa uye anga ari manyuko ekurudziro kuzviuru zvevanhu, uye kwatiri, chiratidzo chechimiro. Mune yedu posvo nhasi, tinokuratidza iyo inonyanya kufarira data iwe yaunogona kuwana nezve Alexa Chung. Yedu Hanukeii Musikana wevhiki!
Iwo misika inoyevedza kuMadrid kwaunogona kutora akanakisa mafoto eako Instagram
In Hanukeii isu tine chirongwa chevhiki ino! Iwe haugone kupotsa misika iri kuonekera zvakare mumigwagwa yeMadrid. Isu tinokuudza zvese zvakadzama nezve mana acho. Zvimwe zvinhu zvakasarudzika uye zviitiko zvaunogona kuita mazviri. Pasina kupokana, dzakasiyana nzvimbo, senge iwe!
Mamwe maawa ekupenya kwezuva? Yakawanda nguva yemasikati!: Iwo mashanu akanakisa matenga muMadrid.
Matenga akaita seMadrid ... mashoma! Mamiriro ekunze akanaka asvika uye kupisa ndiko protagonist kwemazuva edu. Saka nzira yakanakisa yekuzorora ndeyekunakidzwa nehurongwa hwakanaka hwemasikati muguta neshamwari. Isu tinokuratidza iwe mashanu akanakisa matenga eMadrid ayo iwe aunogona kushanyira ino vhiki!
Maitiro ekubatanidza magirazi ako ezuva zvinoenderana nechiitiko chega chega uye usatadze mukuyedza. Tinokupa makiyi!
Hapana nguva yegore zvinoreva kuti tinomira kupfeka magirazi ezuva! Mwaka wega wega, nyowani uye hunyanzvi dhizaini zvinoita senge dzinoenderana nemazuva edu. Icho chishongedzo chisingazombobuda kunze kwechitaera. Isu tinokuratidza dhizaini uye maitiro mune magirazi ezuva aunongogona kuwana mairi Hanukeii.